Propars Features - Tsvaga Propars Zvimiro!
Unogona kutumira zvigadzirwa zvako kuPropars kubva kune yako e-commerce saiti, kubva kune yako accounting account.
kana iwe unogona kurodha yakawanda neExcel,
Kana nePropar, unogona kuisa ruzivo rwese nezve chigadzirwa chako chimwe nechimwe.
Iwe unogona zvakare kutsanangura mitengo yakasiyana yeZvigadzirwa zvako zvemisika dzakasiyana. Nekudaro, iwe unogona kushandisa yakasarudzika mutengo mutemo pane yega e-commerce saiti.
Unogona kuendesa zvigadzirwa sarudzo semuvara uye saizi kumisika yese nekutsanangura mafoto akasiyana nemitengo yakasiyana.
Kana iwe uine inopfuura imba yekuchengetera imwe, unogona kutsanangura matura aya kuPropars. Sitoko yeimba iyoyo yekuchengetera zvinhu nesherufu inovandudzwa otomatiki kubva kudura nesherufu iyo chigadzirwa chaunotengesa chinotakurwa kubva. Neiyi nzira, unogona kuteedzera kuti zvingani zvezvigadzirwa zvako zviri mudura.
Maodha manejimendi: Unogona kuve neyakakwana yekubatanidza yekubatanidza iyo inokutendera iwe kuti uone ako ese maodha kubva kuTurkey kana misika yekunze pane imwe skrini paPropars.
Zvese zvese zvemaodha ako; Iwe unogona kuwana ruzivo rwese kuti mutengi akatenga chipi chigadzirwa pane imwe skrini.
Iwe unogona kupurinda mafomu ekutumira eaya anouya maodha wega kana muhuwandu.
Unogona kuona kudzoreredza & kukanzura zvikumbiro kubva kumisika pamusuwo wePropars.
Iwe unogona kuwiriranisa iyo inodzosa sisitimu neMisika. unogona kushandisa policy.
Bvisa chinodzivirira mutauro wekunze nePropars
Neyo otomatiki yekushandura sisitimu, ruzivo rwechigadzirwa chaunonyora muchiTurkish rinongoshandurirwa mumutauro wenyika yaunovhura musika wekutengesa.
Kana iwe uchida, iwe unogona kuwedzera ako akasarudzika shanduro dzenyika yega yega kune zvigadzirwa zvako kuPropars.
Iwe unogona kuona uye kusarudza mapoka eiyo nyika muTurkey mune chero nyika yaunoda kutengesa zvigadzirwa zvako pamusika.
Iwe unogona kuona "mafirita echigadzirwa" muTurkey, ayo anoita kuti zvigadzirwa zvako zvibude pachena mumisika, uye wozvifananidza nemafirita ako echigadzirwa uye wovhura kuti zvitengeswe. Muenzaniso: GREEN musefa yechigadzirwa ichaonekwa seGREEN mumusika weUK.
MuTurkey, mutengi wako weBritish anoona shangu yaunotengesa saizi 40 se6,5 uye mutengi wako weAmerica se9, saka iwe uchawana kugutsikana kwevatengi nekutengesa chigadzirwa chakakodzera.
Chikwata chePropar chinokudzidzisa nekudzidziswa kwakakosha kuti zvigadzirwa zvako zvinogona kubudirira mumusika upi nemhando yetsananguro yechigadzirwa, mafoto kana mazwi akakosha.
Inoronga misangano yepamhepo yenguva dzose yezvinetso zvaunosangana nazvo mumisika uye inokuudza mhinduro.
Unogona kuendesa zvigadzirwa zvako zvese muakaunzi yako kunyorera kuPropars.
Nechishandiso chaunoshandisa, kusangana kwakazara kunopihwa pakati peTurkey nemisika yemhiri kwemakungwa.
Ese maodha kubva kumisika yekunze neTurkey anowedzerwa otomatiki kune yako accounting application,
Propars ine yakazvimiririra yekubatanidza rezinesi inogamuchirwa neBazi rezveMari.
Unogona kuendesa zvigadzirwa pane yako e-commerce saiti kuenda kuPropars neXML,
Unogona kuvhura zvigadzirwa zvako zvinotengeswa mumisika zvichienderana nechimiro chechikamu pane yako saiti.
Nezve otomatiki zvigadziriso, zvigadzirwa zvitsva zvakawedzerwa kune yako saiti zvinoratidzwa muPropar, uye zvitoro zvako uye masheya mumusika zvinogadziridzwa.
Iwe unogona kuita stock uye mutengo shanduko nekuchengeta yako e-commerce saiti yakagadziridzwa. Kuchinja kwemutengo kwaunoita pasaiti yako kunoratidzwa ipapo pamusika uko chigadzirwa chiri kutengeswa.
NePropars e-kutumira kunze mhinduro, unogona e-kutumira kunze kubva kune yako e-commerce saiti.
Yako 24 zvitoro muTurkey uye makumi maviri nemaviri nyika dzakasiyana
Iwe unogona kubata pane imwechete skrini nePropars.